Horudhac mesh qurxin qaab dhismeedka naafeeyay
Waxaan haynaa qaabab kala duwan oo tidmo iyo cabbirro siligga si aan ula kulanno dhiirigelinta qurxinta ee kala duwan. Mesh-farsameedka farsamada ayaa si weyn loogu isticmaalaa gudaha iyo dibadda dhismayaasha. Ma aha oo kaliya inay leedahay sifooyin aad u sarreeya marka loo eego walxaha asalka ah ee asalka ah, laakiin sidoo kale muuqaal qurux badan, si sahlan u soo jiidashada dareenka dadka, naqshadeeyayaasha qurxinta dhismaha oo badan oo badan ayaa jecel.
Naqshadaynta gaarka ah iyo qeexitaannada waa kuwo la aqbali karo waxaana mar walba sugi doonnaa su'aalahaaga.
Sharaxaadda mesh qurxinta dhismaha ee tidcan ee tidcan
Dhexroorka diifka ah: 1mm
Dhexroor weft: 1x4mm
Dhererka dhererka: 20mm
Dhererka: 8 mm
Miisaanka: 5.3 kg/m2
Aagga furan: 36.4%
Qalabka: aluminium, naxaas, naxaas, bir ahama, steel carbon, iwm
Astaamaha: Ololka retardant, xoog sare, adkaysi, fududahay in qaabaynta, fududahay in la dayactiro
Magaca Alaabta Shabakadda silig-xidhka ah ee la isku qurxiyo
Qalab Aluminium, aluminium alloys, naxaas, naxaas, naxaas, silig bir ah, iwm.
Dhexroorka siliga 0.5 mm - 4 mm
Cabbirka aperture 3 mm-20 mm
Aagga furan 45% - 90%
Miisaanka 1.8kg/m2 - 12kg/m2 (waxay kuxirantahay qaabka iyo walxaha la doortay)
Daaweynta dusha sare Dahaarka qurxinta, Dhigista Uumiga Jirka, US10B iyo US10A Dhamaystir, Dahaarka budada, Baasaska, iwm.
Midabada Naxaasta, Bronze, Naxaasta Qadiimiga ah, Bronze Qadiimiga ah, Nickel, Silver, Gold, iwm
Habka wax-soo-saarka ee mesh qurxinta dhismaha ee naafeeyay
Jiingado bir ah oo aan bir lahayn ayaa qaata hore u foorarsiga iyo samaynta habka tolida, kaas oo u qaybsan tolidda quful, tolidda cad ee laba-geesoodka ah, jiingado hal dhinac ah, dhar diyaarad laba dhinac ah, xargo laba-gees ah iyo tolmo dalool leydi ah. Mesh bir cidhiidhi ah ayaa leh sifooyinka xoogga tolida ee xoogga leh, tolida waarta iyo mesh lebbiska ah.
Habka wax-soo-saarka waxaa loo habayn karaa si sabab la'aan ah. Dharka ka dib, dusha sare waa la nadiifin karaa si loo gaaro saameynta muraayadda, ama waxaa laga samayn karaa midabyo jaale ah iyo kuwo kale. Qurux badan oo deeqsinimo leh, oo ku habboon dhismaha wejiga, qaybinta, saqafka, qoraxda, balakoonka, marinka, iwm. Qurxinta gudaha ee darajada sare waxaa ka mid ah qurxinta tiirarka, rullalusha, marinka jaranjarada, hudheelka, xafiiska, hoolka bandhigga, dukaanka, iwm.
Codsiga mesh qurxinta qaab dhismeedka dunsan ee tidcan
mesh qafis wiishka, mesh golaha wasiirada, mesh qaybta, mesh qaybta, mesh saqafka, mesh qolka kala soocida, mesh albaabka, shabagga jaranjarada, mesh qurxinta guriga gudaha.
Daaweynta dusha sare: daawaynta naxaasta qadiimiga ah, buufinta daawaynta dusha elektiroonigga ah, daawaynta dusha midabka PVD, daaweynta dusha daahan budada ah.
Hore: Daboolka qaboojiyaha aluminiumka gaarka ah
Xiga: Saxan aluminium dalool ah oo loogu talagalay qurxinta gidaarka daahyada
Mesh aluminium balaarineed oo dheeman ah oo loo isticmaalo dhisme...
Kala soocidda mesh ballaadhinta biraha Qalabka: saxan bir kaarboon hooseeya, saxan aluminium ah, saxan bir ah, saxan titanium, iwm. Nooca Gudbitaanka: dheeman, laba geesood, wareegsan, qaab gaar ah, iwm. Daaweynta dusha sare: buufinta rinjiga lidka ku ah, galvanizing kulul iyo caag quusin. Dhumucda: 0.3-8mm Cabbirka: balladhku wuxuu ku dhex jiraa 2m, dhererkana waxaa loo habeeyey iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Habka dhismaha ee saqafka saafiga ah ee la fidiyay: ku dhufo heerka sare ee jiifka li...
Qurxinta dhalada ah ee birta ah ee la dahaadhay silig qurxin ah...
Waxaa jira nooc diyaaradeed, habka loo dhejiyo arc iyo nooc gaar ah oo qaabeynta: shabaqyada derbiga birta ah ee daahyada ayaa ah muuqaal muuqaal ah, furan, badbaadinta booska, kulan fudud oo habboon. Waxay leedahay hawlo badan oo la isticmaalo iyo saamaynta qurxinta marka loo eego alaabta kale, waxayna aad ugu badan tahay shuruudaha ilaalinta deegaanka iyo badbaadada dabka. Astaamaha shabagga qurxinta ee sandwich-ka quraarad
Darbiga Qurxinta ee Birta Aan-Aabaha ahayn W...
Daahyada gidaarka qurxinta mesh xargaha xargaha xargaha xargaha xargaha sharraxaadda alaabta: birta aan fiicnayn ayaa caan ka ah, aluminium, silig naxaas ah iyo silig naxaas ah, Bronze Phosphor iyo agabyada kale sidoo kale waa la habeyn karaa. Dhexroorka kaari toosan: 0.5-2.5mm Dhexroorka xariiqda toosan: 1.5 ~ 8mm Qaybaha ugu muhiimsan: mesh fiilada, tiirka fiilada, garoonka xargaha, garoonka tiirka. Codsiga darbiga daahyada mesh qurxinta iyo alaabta mesh fiilada qurxinta Alaabta mesh-ka waxaa si weyn loo adeegsadaa i...
Hoosta iftiinka, waa qurux iyo xarrago leh. Waxa kale oo loo isticmaalaa dhismaha dhismayaasha Wajiyada, qaybo ka mid ah, saqafyada, saqafyada, balakoonka iyo dariiqyada, indhoolayaasha, jaranjarooyinka iyo Saldhigga Madaarka, hotel, Villa-dhamaadka sare, museum, guriga opera. Waxay leedahay awood koronto oo aad u sarreeya iyo awoodda xajinta, dhexroor dalool sax ah iyo iska caabin daxalka xooggan Caabbinta heerkulka sare, daxalka, dabka iyo qoyaanka Shockproof, lebbiska iyo mesh siman, muuqaal qurux badan ...
Qurxinta / qaybinta / ee aluminium alloy chai...
Daahyada mesh bir tilmaanta Magaca Alaabta Qaybta makhaayadda mesh mesh Midab Dahab ah, Jaalle, Cadaan, Bronze, Cawlan, Cabbirka Lacagta Dhererka ugu badan 10 mitir, ballac ugu badnaan 30 mitir. Material Stee Stee l / Dhexroorka siliga birta 2 Aperture 4*36 Daaweynta dusha sare Rinjiga dubista / titanium plating ratio Aperture 50% Goobta shaqada Huteelada, xarumaha dukaamanka, qurxinta guriga, qolalka shirarka, hoolalka shirarka iyo ...
Qurxinta qolka dibadda ee gidaarka Laser gooyay xardhay ...
Cadaynta laysarka gooyay shaadhka qurxinta ee qurxinta Shayga Sharaxaadda Walxaha aluminiumka ah, xaashida birta ah, birta corten dhumucda 2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,9mm,10mm,15mm Size customized size Max. Cabbirka 1800mm * 6000mm Dusha Dahaarka Daahan budada ah, Midabka PVDF Midab kasta oo RAL ah ee doorashadaada Qaabka (naqshad) Nidaam kasta oo aan u habeyn karno sida baahidaada Codsiga laysarka gooyay shaashadda birta qurxinta ee xardhay 1. Qurxinta gudaha kasta ...